Ụlọ ọrụ Canada Revenue Agency (CRA) na-enye ụzọ dịgasị iche iche iji kwụọ ụgwọ ụtụ isi nke ụtụ isi nke Canada . Ị nwere ike izipu ego, jiri ego na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ekwentị na-akwụ ụgwọ, jiri ọrụ CRA si akwụ ụgwọ m ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ ego nke Canada.
Ịkwụ ụgwọ maka nkwụnye ụgwọ na-akwụ ụgwọ na akara 485 nke nkwụghachi ụtụ gị ga-abụ site n'April 30 nke afọ na-esote afọ ụtụ. Ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ụtụ isi nke Canada , CRA na-ebo gị ebubo na mmasị maka itinye ego ụtụ isi gị n'oge .
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ, jide n'aka na ịnye ozi ziri ezi iji chọpụta akaụntụ nke akwụ ụgwọ a ga-akwụ na ihe ịkwụ ụgwọ bụ maka (afọ ụtụ maka atụ). Mgbe CRA rịọrọ maka Ọnụ Akaụntụ Gị, ha na-arịọ maka akwụkwọ Social Number gị maka ụtụ isi ego nke onwe gị na Ọnụ ego gị maka ụtụ isi ahịa ego.
Tinye otu Nlele ma ọ bụ Ego Ego na Akwụkwọ gị
Ịkwụ Ụtụ Isi Gị. David Sucsy / E + / Getty Images
Ọ bụrụ na ị na-edeghachite akwụkwọ ụtụ isi ego , tinye ego ma ọ bụ ego iji nye ibe mbụ nke nloghachi. Nlele ma ọ bụ iwu ego ga-akwụ ụgwọ na Onye natara. Tinye nọmba nchịkwa Social gị n'ihu ego ma ọ bụ iwu ego. Ndị a bụ adreesị ozi-e maka izipụ akwụkwọ.
Jiri Banking Banyere Ntanetị ma ọ bụ Ekwentị
Ị nwere ike iji ụlọ ọrụ ịntanetị ma ọ bụ ekwentị gị kwụọ ụgwọ CRA n'otu ụzọ ahụ ị si akwụ ụgwọ ndị ọzọ gị. Họrọ Canada Revenue Agency, Revenue Canada, ma ọ bụ Onye Na-anata Ego n'ozuzu nke ndị akwụ ụgwọ. Jide n'aka na ị mata ụdị akaụntụ (nkeonwe ma ọ bụ azụmahịa), nọmba nchịkọta mmekọrịta ma ọ bụ nọmba ego, na oge ịkọ akụkọ ma ọ bụ ụtụ isi nke ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ahụ. Kpọtụrụ ụlọ akụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka.
Jiri ọrụ ịkwụ ụgwọ m
Ọrụ CRA maka ịkwụ ụgwọ m na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ Canada Revenue Agency na-eji Interac Online ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ ịdenye ego na ebe ọ bụla n'ime ụlọ akụ ndị a:
Bank of Montreal (akụkọ naanị ya)
Mkpokọta azụmahịa ahụ ga-abụ n'ime oke ego kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu nke akaụntụ ịdenye ego n'ịntanetị.
Maka ama ndi ozo gbasara oru nkwụ ụgwọ m, lee CRA's Pay Payment FAQ.
Na-akwụ ụgwọ n'otu ụlọ ọrụ ego nke Canada
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụtụ isi nke onwe gị site na nlele ma ọ bụ iwu ego na akụ gị, ma ị ga-etinye mgbakwunye ego maka ịkwụ ụgwọ.
A na-ebipụta akwụkwọ ego akwụ ụgwọ na akwụkwọ ikikere nke ọma, ya mere, mbipụta adịghị mma. Enwere ike ịnye ụgwọ ezumike na ntanetị site na CRA site na Ọrụ Mmasị Akaụntụ M ma ọ bụ site na ekwentị na 1-800-959-8281.
A ga-akwụ ụgwọ ego ma ọ bụ iwu ego maka Onye Natara Ama ma tinye nọmba Social Insurance gị n'ihu.
Ntughari ma ọ bụ Ego
Image Isi / Getty Images
Mee nlele ma ọ bụ iwu ego ị ga-akwụnye n'aka Onye natara ya ma tinye nọmba Social Number gị n'ihu.
CRA chọrọ ka ị mezue ma jikọta ndepụta ezinyere aha gị na ego ma ọ bụ iwu ego.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ ịkwụ ụgwọ, ị nwere ike itinye ihe edeturu na ego ma ọ bụ iwu ego iji gosipụta nọmba Social Number gị na inye ntụziaka ịkwụ ụgwọ (dịka "Ụgwọ a bụ iji kpuchie Balance Owing na Line 485 nke 2016 ego m ụtụ ụtụ rịọrọ [ụbọchị] site na iji [NETFILE]. ")
Ogologo oge ọrụ ikike maka ndị mba ọzọ na Canada
Njem nleta eze na Canada nke Queen Elizabeth
Mbelata maka mpaghara na ógbè na Canada
Ọrụ nke ndị Canada
Joseph nke Arimatia
Kedu Ka Elu Golf ga-esi dị na Tee?
7 Ihe I Amaghi Banyere Jisos
Ịkọwapụta Esemokwu dị n'etiti Jọn na Oziọma Synoptic
Otu esi eme ka umuaka ulo akwukwo
Ịghọta ihe ndị e mere na nkà mmụta mmekọrịta ọha na eze
Ihe Ogbugbu Ọ Dị Mma Karịa Nkwụsị Ogologo?
Ndị Kachasị Mmasị Ndị Mexico Na-enwe Mmasị ebe ọ bụ na ha nwere onwe ha
Ihe omuma nke akwukwo akwukwo Anakin Skywalker, Ahsoka Tano
Jizọs na Ndị Mmụọ Ọjọọ Na-ata Ahụhụ (Mak 5: 10-20)
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-ebelata na Russia
Aha nna Stewart na ihe ya na akụkọ ihe mere eme
Open Open na-agbanwe maka ndị na-egwu mmiri
K2: Otu esi agbagoo okporo ụzọ
Otu esi ejikọta "oku" (ka ihichapu)
Kedu Otu Nkịtị si akọwa Njirimara Ike
Glow in the Dark Dark Geode
Egwú egwu 101
Grammar na Bekee Definition na Ihe Nlereanya
Otu esi agwa ndị ezinụlọ nọ na Mandarin Chinese
Ụmụnna Ndị Kraịst na Nkwa ahụ
Fantasy Baseball: Na-edezi Mbụ Mbụ